Igumbi e-Antica Corte Lombarda
(224 okushiwo abanye)
Ferno, Lombardia, i-Italy
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Laura E Gaia
Igumbi "i-Oltremare" lingakwazi ukuhlalisa abantu abangu-3/4, litholakala efulethini elisanda kulungiswa, linethuba lokusebenzisa ikhishi, njengendlu yokugezela, labelwa elinye igumbi.
Itholakala eduze kwesikhumulo sezindiza.
Igumbi le-Oltremare, elinethezekile futhi livulekile, lifakwe umbhede ophindwe kabili + umbhede owodwa, usofa onethezekile, isimo somoya kanye ne-wi-fi yamahhala futhi lingakwazi ukuhlalisa abantu abangu-3 ngokukhululeka.
Njengoba kuphakanyiswe izivakashi zethu
4.90(224 okushiwo abanye)
4.90 · 224 okushiwo abanye
Indlu yethu iphakathi nendawo yaseFerno, phambi kwethu kunenkulisa kanye nehlathi likaphayini lesikole samabanga aphansi, uma usuka kude nje uzothola izitolo, indawo yokucima ukoma, indawo yokucima ukoma, indawo yokucima ukoma, indawo yokucima ukoma. okumnandi ice cream egumbini lokuphumula, futhi ngisho eyodwa
Ibungazwe ngu-Laura E Gaia
Uma ufika uzobingelelwa yimi noma umndeni wami, ukukunikeza izikhiye futhi ngikunikeze lonke ulwazi oludingayo.
Kunoma yisiphi isidingo, singomakhelwane!
ULaura E Gaia Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 012068-BEB-00016 H00320
Ngena: Ngemva kwalokho 19:00